अदालतका दृश्य-अदृश्य खलपात्रहरु - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ श्रावण १३, मंगलवार ०७:२७:००
दोस्रो विश्वयुद्धताका जब लण्डनमा बमबारी सुरु हुँदै थियो, तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले सोधे— के अदालतले काम गरिरहेका छन् ?
जब सकारात्मक जवाफ आयो, चर्चिलको प्रतिक्रिया थियो, ‘धन्य भगवान् । यदि अदालतले काम गरिरहेका छन् भने कुनै गलत हुन सक्ने छैन ।’
नेपालमा पनि ठूल्ठूला संकटहरुमा अदालतले जनताका हक अधिकारको संरक्षण गरेको थियो । हाल सत्तामा रहेका होऊन् वा सडकमा, हरेक नेताले अदालतको संरक्षणमा नागरिक हकको आवाज बुलन्द गर्ने मौका पाएका छन् । तत्कालीन सत्ताले उनीहरुमाथि वक्रदृष्टि राख्दा अदालतले जोगाएको थियो ।
पञ्चायतकाल होस् या संकटकाल, हरेकपटकका नागरिक हकमाथि संकटका बादल मडारिँदा एक मात्र आस भरोसाको केन्द्र अदालत बनेको थियो । जनमनोविज्ञान चरम निराशामा जाँदा पनि अदालतले नै आशाको दीयो जगाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको खारेजीले त राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही मात्रै ढलेन, राजतन्त्रकै धरातललाई कमजोर बनाइदिएको थियो ।
यिनै कारण विभिन्न थरीको कुदृष्टि परिरहन्छ । विभिन्न तत्वले यसलाई आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाइरहन्छन् । आफूअनकूल भएन वा आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नुपर्यो भने अदालततिर धारे लगाउनेको कमी छैन ।
हिजो अदालतकै संरक्षणका कारण जीवन र स्वाभिमान जोगाएकाहरु आज अदालतमाथि खनिन पनि बेर लगाउँदैनन् । यो मानव स्वभाव नै हो । तर अदालत सधैँ अटल रहन्छ, रहनुपर्छ ।
अदालत उभिने धरातल भनेको उसप्रति जनताको विश्वास हो । जनास्था डग्मगाएपछि अदालत डग्मगाउँछ । त्यसैले तानाशाहीहरुको पहिलो निशाना अदालत हुने गर्छ । अदालतमा बमबारी नगर्लान् । तर काबुमा राख्न हरेकले चाहेको हुन्छ । अदालतलाई काबुमा राख्न सके तिनका स्वेच्छाचारी गतिविधिले वैधता पाउँछन् । नागरिक आवाज दमन गर्न सके तिनका स्वेच्छाचारी कदमको आलोचना हुन पाउँदैन । तसर्थ, सत्तामा हुनेहरुले अदालतमाथि प्रहार गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ । तर आश्चर्य के भने यहाँ विपक्षी पनि अदालतविरुद्ध खनिएका छन् । अदालतमाथि प्रहार गर्ने एक प्रकारले प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । जति चर्को विरोध, त्यति क्रान्तिकारी भइने होड चलेको छ यहाँ ।
अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्व र त्यसप्रतिको जनास्था डग्मगाउन यसभित्र र बाहिर सबैतिर खलपात्रहरु थिए, छन् । अदालतभित्रै पनि तमाम खराब प्रवृत्ति नभएका होइनन् । कहिले अदालतमा रहेर कतिपयले राजनीति गर्ने रहर गर्छन् र खिलराज रेग्मी भएर निस्कन्छन् । त्यतिखेर संविधानसभा खाइदिएर ६ सय १ जना सभासदलाई सडकछाप बनाइएको प्रसंग राजनीतिज्ञहरु पनि बिर्सन्छन् र आफ्नो सिंहदरबारको सिंहासनलाई खिलराजलाई बिराजमान गराउँछन् । त्यतिखेर अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्व के भयो ? कसैलाई पीर पर्दैन ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई रातारात अदालतबाट अनुमोदन गर्ने गराउने पात्रहरु को थिए ? त्यतिखेरको चलखेलबारे जानकार व्यक्तिहरु अहिले पनि सिंहदरबारकै वरिपरि छन् । रुक्मांगद कटवाल काण्डले कसरी अदालतबाट वैधता पायो ? हालसम्म उमेर र प्रमाणपत्रमा विवादित प्रधानसेनापतिहरुको पद छउन्जेल किन फैसला भएनन् ? त्यतिखेर बोल्न कसले छेकेको थियो ? अदालतको निष्ठामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनेहरु कोको थिए ? त्यतिखेर खोज्नुपर्ने जवाफ अहिलेसम्म किन खोजिएको छैन ?
सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लाग्दा भावुक कविताको शैलीमा लेखिएको आदेश सञ्जीवनी बुटी बन्यो । त्यतिखेर सबैलाई न्यानो नै लाग्यो । तर सुशीला कार्कीबाट भएका कतिपय हचुवा निर्णयबाट विधिशास्त्र र न्यायिक प्रक्रियामा परेको प्रभाव अध्ययन गर्ने फुर्सद कसलाई ?
एनसेल प्रकरणमा उही स्तरको एउटा इजलासबाट एक प्रकारको फैसला, अर्को इजलासबाट अर्को खालको फैसला हुनुमा कसको भूमिका छ ? त्यसमा राज्यको केकति नाफा वा नोक्सान भयो ? हिसाब कसले राख्ने ? त्यतिखेर चुँसम्म बोल्न नसक्नेहरु अहिले एउटा नियमित प्रक्रियामा अघि बढेको मुद्दामा पाँच हजार भोल्टको आवाज निकालेर माइतीघरमा कराउँदै छन् । त्यो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने समिति बनाउनेहरु अहिले कहाँ के गर्दै छन् ? किन अहिलेसम्म त्यस्ता समितिले काम गरेनन् ? यसको उत्तर पनि खोज्नैपर्ने भएको छ ।
अदालत आफै बोल्दैन । अदालत बाहिरियाका कुरामा प्रतिक्रिया दिई हिँड्दैन । योसँग आफ्नै प्रहरी पनि हुँदैन । यो स्वयं निःसहाय हुन्छ । निहत्था हुन्छ । त्यसैले त यो संवेदनशील पनि हुन्छ । जब यसको संवेदनशीलतामाथि प्रहार गरिन्छ, त्यसपछि समाज र व्यवस्थाभित्र कुनै पनि कुरा लयमा हुन छाड्छ ।
अप्ठेरो पर्दा यसका पक्षबाट बोलिदिनुपर्छ । अरुलाई न्यायको छहारी दिनुपर्ने अदालत नै चौतर्फी आक्रमणमा पर्दा रामराम पनि भन्न नसक्नेहरु न्याय र निष्ठाका शत्रु हुन् । अदालतका अदृश्य खलपात्र हुन् ।
कानुन र न्यायको रोहमा हुने गल्ती कमजोरीहरु अदालती प्रक्रियाबाटै सच्चिन सक्छ । सच्याउने ठाउँ रहन्छ । यो नै विधिसम्मत तरिका हो । १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने कुनै व्यक्ति साढे ८ वर्ष बसिसकेको छ र तत्कालीन परिवेशले बाँकी सजाय मिनाहा हुन सक्ने ठाउँ देखेमा राज्यले पनि मिनाहा गर्न सक्छ । न्यायाधीशको विवेकले पनि यो आदेश गर्न सक्छ । त्यही कारण न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ र खुलापन कानुनले राखेको हुन्छ ।
तर, न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर गरेको अमुक निर्णयलाई लिएर यहाँ के निहुँ पाऊँ र कनिका बुुकाऊँ शैलीमा उधिनपाधिन गरिँदै छ । यसले सत्ता नै डगमगाउन लागेका बेला बालुवाटारवासीलाई त राहत नै दिएको होला ।
केही दिन भए पनि राष्ट्रिय आक्रोश विषयान्तर भएको छ । उस्तै परे एकाध माननीयहरुले काम देखाउन महाभियोगको मन्त्र पनि फलाकी हिँड्ने छन् । लकडाउनमा विज्ञापन नपाएर छटपटाएका र पाठक समेत गुमाएका मूलधारका मिडियालाई व्यवसाय फर्काउने मसला बनेको छ । तर संस्थाको संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी हुने टीकाटिप्पणी र बजारिया हल्लाखल्लामै बहकिने प्रवृत्ति घातक छ । यो प्रवृत्ति अदालतविरोधी प्रवृत्ति न्यायविरोधी पनि छ ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरुसँग लामो कार्यकाल हुँदैनथ्यो । छोटो कार्यकालमा धेरै काम भ्याएर जान खोज्थे । त्यसो गर्दा काम कम, विवाद धेरै हुन्थ्यो ।
चोलेन्द्रशमशेर राणा लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश हुन् । जसरी राजनीतिमा स्थायित्वको मुद्दा अहं बनेको छ, त्यसैगरी न्यायिक स्थायित्व कायम गरी संस्थागत पद्धति बसाउने प्रयासमा उनी लागेको देखिन्छ । सुरुमा उनले न्यायिक स्वच्छता कायम राख्न जुन सर्जिकल स्ट्राइक शैलीमा आक्रामक कदम चाले, त्यसले नतिजा दिन थालेको छ ।
धेरै न्यायाधीश छानबिन र कारवाहीमा परेका छन् । अदालतभित्रको अराजकता धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका काम धेरै हदसम्म पारदर्शी र विधिसम्मत मापदण्डका आधारमा हुन थालेका छन् ।
सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्न र विवादलाई समेत राणाले गम्भीरतापूर्वक लिएर सुनुवाइ गर्ने संस्कृतिको सुरुवात गरेका छन् । रञ्जन कोइराला प्रकरणमै पनि पुनः परीक्षण हुनुपर्ने माग स्वीकार गरी सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गराएका छन् । यसमा राणाको उदात्तता नै प्रकटित हुन्छ । उनले धेरै सकारात्मक पहल र निर्णय गरिरहँदा पनि छिद्रान्वेषी शैलीमा गरिने आलोचना र प्रहारले न्यायालयको संवेदनशीलता खत्तम पार्ने उद्देश्यलाई पुष्टि गर्छ ।
तसर्थ, सके अदालतको प्रतिरक्षा गरौँ, नसके प्रहार पनि नगरौँ । किनभने, यो संकटमा काम लाग्छ । सारा आसभरोसा टुटेपछि पनि अदालत छ भने आशाको त्यान्द्रो रहन सक्छ ।
यसकारण न्यायाधीशको विवेकमाथि प्रश्न उठाउनुअघि हरेकलाई एकपटक स्वयं आफ्नै विवेकमाथि प्रश्न गर्ने हो कि ?
न्यायाधीशको मान राख्न नसक्ने न्यायपरिषद्, केके हुँदै छ चलखेल ?
अदालतमा खल्ते न्यायाधीशको बिगबिगी
अदालतको चाप्लुसीतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रयास
न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने कि विधिसम्मत उपचार खोज्ने ?